« Zoma de la francophonie » : homen-danja ny « vita malagasy » | NewsMada
« Zoma de la francophonie » : homen-danja ny « vita malagasy »
Amin’ny 20 marsa ho avy izao, hankalaza ny Andron’ny Frankofonia ireo rehetra avy amin’ny kaontinanta dimy mampiasa sy miteny frantsay. Hankalazaina amin’ny endriny maro samihafa izany eto Madagasikara, eo amin’ny sehatry kolontsaina fa indrindra, eo amin’ny lafiny fihariana. Amin’izay fihariana izay indrindra no hanomezana toerana ny « Zoma de la francophonie », hatao ny 23 sy 24 marsa eny Andohalo. Niainga avy amin’ny tsiaro ny tsena teo aloha isan-kerinandro natao teny Andohalo, Antaninarenina ary teo Analakely izany, nanehoana ny tena « vita malagasy » eo amin’ny karazana asa tanana samihafa vita amin’ny akora isan-karazany.
Atokana indrindra ireo fotoana ireo hanomezan-danja ny « vita malagasy » hahafantarana bebe kokoa ny kolontsaina mifamatotra amin’ny asa tanana. Homen-toerana ihany koa ny fanaovan’ny tanora karazana hosodoko nomena anarana « Art a be ». Porofoina fa afa-miaraka tsara ny talentan’ny tany aloha sy ankehitriny. Hisy amin’ireo fotoana ireo koa ny « Apero urbain » hatokana ho amin’ny mpitsidika ho eny an-toerana hankafy ny zava-pisotro « vita malagasy ».
« Vary mitsangana »
Tsy adino, hahazo ny anjarany ireo mpakafy sakafo gasy. Koa hisy ny « Vary mitsangana » ho azy ireo amin’izany, hankafizana ny vary amin’ny anana, masikita, ramanonaka, menakely, sns. Olona efa matihanina ny miandraikitra io sehatra io, ny chef Lalaina sy ireo hafa manan-talenta miaraka aminy.
Mialoha io fotoana io, hisy fifaninanana sary ampanaovin’ny Tarajava distribution et communication, mpiara-miombon’antoka amin’ny Délégation générale de l’organisation amin’ny fikarakarana ny fivoriamben’ny frankofonia faha-16 hatao eto amintsika. Azo hakan-kevitra mialoha momba izany: tarajavadc@gmail.com.